Kasị 5-HTP na-mara dị ka oxitriptan (njem) na-amịpụtara si mkpụrụ nke a Original Mix rịa shrub nwaafo ka West Africa, a na-akpọ Griffonia simplicifolia osisi.
Gịnị bụ 5-HTP?
5-HTP ma ọ bụ "hydroxy L-tryptophan" (5-Hydroxytryptophan) bụ a ndammana-ewere ọnọdụ amino acid na bụ precursor na metabolic n'etiti na biosynthesis nke neurotransmitters serotonin na melatonin si tryptophan. 5-HTP na-ghọrọ ka ọgụgụ akwara mbufe ozi serotonin (5-HT), na-enyemaka nke vitamin B6.This emee ma na ụjọ na-atụ anụ ahụ na na imeju. 5-HTP obe ọbara-ụbụrụ mgbochi (mgbe 5-HT adịghị). Supplementation na 5-HTP mere enwekwu mmepụta nke serotonin.
5-HTP ike uru
Ọtụtụ-eji aka na ibu oké ibu (achọghị), PMS, oké isi ọwụwa, ịda mbà n'obi, nchegbu, ehighị ụra nke ọma na-eri ahụ na omume. 5 HTP enwekwu mmepụta nke serotonin. Serotonin etoju ke ụjọ usoro ndị dị oké mkpa n'ihi na otú ọtụtụ akụkụ nke anyị kwa ụbọchị ndụ. Serotonin bụ maka mmetụta nke ọma eke, afọ ojuju na n'ihi na nkịtị na-ehi ụra nakawa etu esi. Ibu oké ibu, PMS, oké isi ọwụwa, ịda mbà n'obi, nchegbu, ehighị ụra nke ọma na-eri ahụ na omume niile e jikọtara ya na ala etoju nke serotonin. Serotonin ekere òkè dị mkpa na ịchịkwa iwe, ime ihe ike, ahu okpomọkụ, na ọnọdụ, na-ehi ụra, mmekọahụ nke mmadụ, agụụ, na metabolism, nakwa dị ka na-akpali akpali vomiting.
Ọ na-eche na ọtụtụ oge a si ebi ndụ nke nchekasị na ihe ọjọọ na-eri àgwà lowers serotonin etoju ke idem. Ọ maara na mgbakasị, ime ike, ndidi, nchegbu na ichegbu onwe akpata ahụ nyak serotonin. Nke a serotonin mgbe kwesịrị ka a replenished site ahụ si nri ị na-eri. Ma serotonin na-ahụghị na nnukwu quantities na ọtụtụ diets otú ahụ nwere na-eme ka ya onwe ya si oriri nke nwere L-tryptophan, dị ka chocolate, oat, unere, mịrị amị ụbọchị, mmiri ara ehi, bred, obi cheese, anụ, azụ, toki , ọkụkọ, sesame, chickpeas, na obere ego. Ọtụtụ ndị mere na-achọsi oriri depụtara (abụba na carbohydrates), karịsịa mgbe mesiri, na-eme ibu ibu, ịda mbà n'obi, isi ọwụwa, na ike ahu aches.
Atkins Diet - belata cravings
Clinical ọmụmụ gosiri na supplementing na 5-HTP na-arụpụta ezi ihe na arọ ọnwụ, nchegbu na ịda mbà n'obi. Ọ mma ụra ihe nakawa etu esi na-ebelata carbohydrate cravings na ndị na ala carbohydrate diets (dị ka The Atkins Diet). Onye ọ bụla na-eji a arọ ọnwụ omume yiri Atkins Diet nwere ike na-enwe a gụnyere ya ná serotonin etoju n'ihi na eziokwu na carbohydrates akpali serotonin mmepụta ke idem. Serotonin ntọhapụ na-triggered site a carbohydrate ibu (sugar wdg) na ọ na-eche na ihe mere anyị na-emekarị na-achọsi carbohydrates n'okpuru nchegbu ka anyị chọrọ na-akpali nke a serotonin tọhapụ. Mgbe ụbụrụ na-arụpụta serotonin, erughị ala na-belatara. Ọzọ mgbe ụbụrụ na-arụpụta dopamine ma ọ bụ nọrepinefrini (noradrenaline), anyị na-agbasaghị na-eche ma na-eme ihe ngwa ngwa na ha na-adịkarị ọzọ anya. Ya mere na-eri carbohydrates yiri ka nwere a calming mmetụta, mgbe ndi na-edozi dịkwuo alertness.
Inweta 5-HTP Mmeju nwere ike ịkwụsị nke a agụụ maka abụba na carbohydrates, nakwa dị ka na-enye ihe n'ahụ ihe ndị e ji ịchịkwa niile ndị ọzọ na ọrụ ahụ e depụtara n'elu, dị ka iwe, agụụ na-ehi ụra.
Nyere na ịda mbà n'obi na Nchegbu
Nnyocha ụfọdụ e mere n'ime 5-HTP na-egosi na o nwere ike iji nyere aka na ịda mbà n'obi na ikekwe nchegbu, oké ụjọ aghara, nsogbu ihi ụra na ibu oké ibu. 5-HTP na o yiri ka nwere otu mmetụta dị ka SSRI (Nhọrọ serotonin Re-uptake inhibitors) antidepressants.
Prescription ọgwụ ọjọọ na-eweli serotonin etoju na-kenyere a niile nsogbu, ma ọtụtụ ndị kweere 5-HTP bụ a eke ụzọ mezuo otu ihe ahụ.
Maka imeziwanye ụra, ọ na-ebe-na-atụ aro na-5-HTP 30 mins tupu na-aga bed, dị ka iche site na-amị serotonin, 5-HTP na-emepụtakwa melatonin, nke bụ a na-ehi ụra-inducing hormone. Ndị na-adị onunu ogwu bụ ma a 50mg ma ọ bụ 100mg mbadamba. Mmetụta nke na-ewere 5-HTP nwere ike obi n'ime 10 na 30 mins.
Gbalịa ịzụta 5-HTP nke nwekwara vitamin B6, dị ka Vit B6 dị mkpa n'ihi na 5-HTP akakabarede n'ime serotonin.
Nnọọ elu doses yiri ka a chọrọ n'ihi na arọ ọnwụ na iji belata oké isi ọwụwa. Dosages ruo gburugburu 900mg a ụbọchị yie ka n'ọtụtụ ebe kọrọ.
5-HTP na-emekarị na-anabata nke ọma karịa omenala antidepressants. Ngafe 5-HTP na-eche na a ga-metabolized na anyụpụ, karịsịa mgbe a na-na Vitamin B6.
Gịnị mere na-agbalị ụfọdụ taa na-ahụ ma ọ bụrụ na gị onwe gị kwa nwere ike belata gị cravings, nchegbu na iwe na-etoju, nakwa dị ka na-a ezigbo ụra abalị!
5-HTP Uru Kasị 5-HTP na-mara dị ka oxitriptan (njem) na-amịpụtara si mkpụrụ nke a Original Mix rịa shrub nwa afọ ...